Ka esi azụta Bitcoin na Nnyefe ozugbo nke Chime
Ndị otu nkwado
Chime instant transfers (Online wallets) ndụmọdụ obodo
Q. Kedụ ka m ga-esi zụta Bitcoin na Chime instant transfers ?
Kedu ka m ga - esi tinye ndụmọdụ na ndụmọdụ maka Chime instant transfers ?
I nwetara $0.65 na dọla
N'agbata 50.00-1,000.00 USD
1.550438 USD kwa Bitcoin
ZỤTA BITCOIN UGBU A
Ahụla minit 1 ago
I nwetara $0.89 na dọla
N'agbata 100.00-5,000.00 USD
53345.6896 USD kwa Bitcoin
Ahụla ụbọchị 1 ago
I nwetara $0.69 na dọla
N'agbata 100.00-400.00 USD
68587.3152 USD kwa Bitcoin
I nwetara $0.85 na dọla
N'agbata 50.00-200.00 USD
55727.1936 USD kwa Bitcoin
Chime instant transfers Tụlee 88 ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa niile maka ịzụta Bitcoin na Chime instant transfers
Q. Kedu ka m ga - esi tinye ndụmọdụ na atụmatụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye aka na ihe ọmụma maka usoro ọkwụkwụụgwọ ngwa biko dee ndụmọdụ ọbụla ị nwere maka usoro ọkwụkwụụgwọ na akwụkwọ maọbụ okwuọnụ. Anyị ga-agbakwunye ya na ibe maka usoro ahụ ma jiri aha njirimara gị nye gị otuto. Na-atụ anya ịhụ profaịlụ gị na ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ọtụtụ nchọcha njini nwetara.
Inyefe dịka guest
Tinye na ndepụta ndị nkwado
Jiri zụta Bitcoin
Ekele maka ịkpọrọ anyị isonye Paxful
squadus akwadola gị ị:
Nwee akpa ego Bitcoin n'efu
Zụta ma Ree Bitcoin na ụzọ 350+
Zụrụ Bitcoin ozugbo
Nwee koodu efu pụrụ iche, nke pụrụ iche iji kpọọ ndị mmekọ ga eme n’ọdịnihu
Mepee akaụntụ Mechie ozi a